NEW INDUSTRY |
Momba ny tombony azo avy amin'ny lovia taratasy vita amin'ny tontolo iainana
avy amin'ny admin tamin'ny 21-09-07
Fantatsika fa tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny firenena dia nametraka ny votoatin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny haavon'ny fampandrosoana matanjaka ny angovo madio. Amin'ity toe-javatra ity, misy fiatraikany mivantana amin'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana ny fisian'ny famafana taratasy vita amin'ny tontolo iainana. Ny fampiasana tontolo iainana havaozina ...
Inona no antony manohana ny valizy?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-23
Ny vinan'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fitoeran-taratasy dia malalaka, ary ny fitoeran-taratasy koa dia ampiasaina amin'ny indostria maro. Ny antony dia fintinina toy izao: (1) Ny fampandrosoana ara-toekarena haingana dia manome fotoana fampandrosoana ho an'ny indostrian'ny fonosana taratasy. (2) Ny fanatsarana hatrany ny p ...
Endri-javatra amin'ny fonosana pulp
Ny fonosana dia mivezivezy amin'ny rafi-pitaterana manontolo avy amin'ny akora, ny fividianana, ny famokarana, ny varotra ary ny fampiasana, ary misy ifandraisany amin'ny ain'olombelona. Miaraka amin'ny fampiharana hatrany ny politika fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny tanjon'ny mpanjifa miaro ny tontolo iainana, ny poll ...
Ny toetran'ny fampandrosoana pulp any Shina
Araka ny toe-java-misy vaovao any Shina, ny toetra mampivoatra ny famolavolana pulp indostrialy dia toy izao manaraka izao: (1) Ny tsena fananganana indostrialy pulp dia mamorona haingana. Tamin'ny taona 2002, ny vokatra fonosana plastika vita amin'ny plastika dia nanjary marika fampiharana nasionaly lehibe ...
Ny fampandrosoana ny teknolojia famolavolana pulp any Shina
Ny fampiroboroboana ny indostrian'ny pulp any Shina dia efa ho 20 taona no nanam-tantara. Ny orinasa Hunan pulp moulding dia nanambola vola mihoatra ny 10 tapitrisa yuan tamin'ny taona 1984 mba hampidirana tsipika rotary karazana amponga rotary mandeha ho azy avy any France, izay ampiasaina amin'ny famokarana lovia atody, izay ...
Ny satan'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fonosana marani-tsaina ao Shina
Ny fonosana marani-tsaina dia manondro ny fampidirana fananana mekanika, herinaratra, elektronika ary simika amin'ny teknolojia vaovao ao anaty fonosana amin'ny alàlan'ny fanavaozana, mba hananana fonosana ankapobeny sy fananana manokana hamaly ny fepetra takiana manokana amin'ny entam-barotra. Tafiditra ao ...
Fonosana sakafo boaty baoritra, Box Mf kosmetika, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana, Pulp Cup Holder, Fako Pulp voaoloko, Boaty fonosana sakafo,